Her Private Life – Gold Channel Movies
9.3 77 votes
Episode 1 Apr. 10, 2019
Episode2Apr. 11, 2019
Episode5Apr. 24, 2019
Episode6Apr. 25, 2019
Episode7May. 01, 2019
Episode 8 May. 02, 2019
Episode 11 May. 15, 2019
Episode 12 May. 16, 2019
Episode 13 May. 22, 2019
Episode 14 May. 23, 2019
Episode 15 May. 29, 2019
Episode 16 May. 30, 2019
ဇာတ်ကားနာမည်က “Her Private Life” တဲ့။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက Park Min-young, Kim Jae-wook, Ahn Bo-hyun နဲ့ One တို့အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ “Her Private Life” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Kim Sung-yeon ရဲ့”Noona Fan Dot Com” ဆိုတဲ့ဝတ္တုကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားခဲ့တာပါ။ မင်းသား မင်းသမီးတွေကတော့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ ?
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက ဒီလိုပါ။ ??
Sung Deok-Mi (Park Min Young)ကအနုပညာပြခန်းတစ်ခုရဲ့ ပြတိုက်မှူး တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အဆိုတော်အဖွဲ့ဝင်လေးဖြစ်တဲ့ Shi-An ကိုလည်း အရူးအမူးစွဲလမ်းနှစ်သက်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါတဲ့။ ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင် fan website တစ်ခုတောင်ထောင်ထားပါသတဲ့။ ? Shi An အပေါ်သူမရဲ့စွဲလမ်းမှုကြောင့် ပြတ်စဲရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ လူမှုရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါသတဲ့။ Sung Deok-Mi ကခုလက်ရှိမှာတော့ အလုပ်အပေါ်အာရုံစိုက်ရင်း Shi Ah ရဲ့ fangirl အဖြစ်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။
တစ်ရက်မှာ.. Sung Deok Mi အလုပ်လုပ်နေတဲ့အနုပညာပြခန်းကို ပြခန်းဒါရိုက်တာ အသစ်တစ်ယောက်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့.. Ryan Gold (Kim Jae-Wook) ပါ။ အရင်ကနာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ပန်းချီဆွဲခြင်းအလုပ်ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့သူပါ။ Ryan ရဲ့ကာရိုက်တာက တခြားသူတွေအပေါ် အလေးထားစိတ်ဝင်စားလေ့မရှိတတ်တဲ့သူ (အချေစိန် ?) ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လိုဆိုဆို Sung Deok Mi က Shi-Anရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး website တစ်ခုတောင်ပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါ… Ryanတစ်ယောက်အချေစိန်ကနေ စပ်စုစိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ?
Nam Eun Ki (Ahn Bo-hyun) ကတော့ ဂျူဒိုကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ Sung Deok-Mi ရဲ့ငယ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သလိုသူမကိုတစ်ဖက်သတ်ချစ်နေရသူပါတဲ့။
Cha Shi-an (One) ကတော့ “White Ocean” ဆိုတဲ့ အဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ပါရမီနဲ့အတူ ချောမောတဲ့ရုပ်ရည် ကြောင့် အဖွဲ့သားတွေအကြားမှာ ရေးပန်းအစားဆုံး ဖြစ်သလို Sung Duk-mi အပါအဝင်များစွာသော အမာခံပရိတ်သတ် တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ idol တစ်ယောက်ပါ။
idol ကို သဲသဲလှုပ်ချစ်တဲ့ မမရယ် မမကိုမှစိတ်ဝင်စားမိသွားတဲ့ အချေစိန်ကိုကို ရယ် တို့ကြားမှာ.. ဘယ်လိုဘယ်လိုတွေများဖြစ်လာမလဲ??? ဆိုတာကိုတော့ လာမယ့် အေပရယ် (၁၀) ရက်နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူး-ကြာသပတေးနေ့ည ၉:၃၀ (KST) တိုင်းtvNရုပ်သံလိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။
Review credited to KdramaCraziesMMFanDrama
Original title 그녀의 사생활
HninApril 11, 2019Reply
ThinApril 11, 2019Reply
fight Ryan.. waiting for new ep.. u r so smart and the best.
NandaApril 14, 2019Reply
Please hurry 16 eposied
chan lunApril 17, 2019Reply
Movie Info ကို unicode ကော Zawgyi နဲ့ကော တငျပေးရငျကောငျးမယျ။ Gold Channel fighting!!! Facebook page ကိုမတှတေ့ာကွာပွီ အသဈပွနျမဖှငျ့တော့ဘူးလား
gcmoviesApril 17, 2019Reply
chan lunApril 26, 2019Reply
ThuzarNovember 21, 2019Reply
Her private life drama is pleasant. So, you can upload this dramma links.
စက္ကထရီ KIm နဲ့ Love Temperature ထဲက ကိုယ်စားလှယ်ကြီးရဲ့ ဇာတ်ကားသစ် ကြည့်ချင်နေတာ။
အသစ်ပြပြချင်း တန်းတင်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
ZZLApril 25, 2019Reply
MoonApril 26, 2019Reply
ChanMay 13, 2019Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..?ဆက်တင်ပေးပါဦး ကြည့်လို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ
KhinlayMay 15, 2019Reply
Aung Myint ThuMay 30, 2019Reply
Ep15 Openload SD လေးတငျပေးပါဦး
Ep15 Openload SD လေးတင်ပေးပါဦး
gcmoviesMay 30, 2019Reply
AndrewAugust 25, 2019Reply
download နိပ်တာ မရဘူး အလင်းပြပါ ဘယ်လို download ဆွဲရမလဲ please
ဘယ်လို download လဲplease မသိလို့
SayneMay 31, 2019Reply
Thanksalot, GCM
Aung Myint ThuMay 31, 2019Reply
HeinhtetJune 9, 2019Reply
အပိုင်းက ကုန်သွားပြီလား အကို
gcmoviesJune 9, 2019Reply
KillerMarch 31, 2020Reply
I want to duck the actress
sonyJuly 3, 2019Reply
when stars land လေးတင်ပေးပါ please